Disney + ikozvino inoshanda paLinux pasina kuita chero hunyengeri | Linux Vakapindwa muropa
Hatigone kuti tinochida, asi isu tinofanirwa kuzvipira kuuchapupu: Mugovera wemusika weLinux wakaderera kwazvo. Maererano mamwe midhiya, muna 2019, mugove wemusika uri pasi pe1%, nepo vatengi veMicrosoft masystem (kubva paWindows XP kuenda kuW10) vakasara vangangoita 90% yepayi. macOS iri padyo ne6% pasirese, asi inopeta chikamu chayo chemusika muUnited States, ndosaka vazhinji vanogadzira, senge veiyo vhidhiyo chikuva Disney +, vanovachengeta zvakanyanya.
Kupfuura mwedzi wapfuura nhau dzakabvaruka, imwe yeaya atinogona kutaura yaive isiri nhau: Disney + yaisazoshanda paLinux pakuvhura. Dambudziko raive iro digital rights management (DRM) yakashandisa chikuva, asi nerombo rakanaka iro ratove dambudziko rekare, sezvakataurwa naJustin Garrison, injinjini yebasa, uye yakasimbiswa nevamwe vashandisi pasocial network Twitter.
Disney + ichasvika kuSpain munaKurume 31, 2020
Zvinotarisa #DisneyPlus iri kushanda paLinux izvozvi !! ?
Iye zvino vashandisi veLinux desktop vanogona kunakidzwa #BabyYoda kufanana nevamwe vese !!!! ✨
- Justin Garrison (@rothgar) December 4, 2019
Zvinoita sekunge Disney + iri kushanda paLinux izvozvi! Iye zvino desktop desktop vashandisi vanogona kunakidzwa neMucheche Yoda semumwe munhu! Enda unoyerera!
Neraki kana zvinosuwisa, vashandisi veSpanish havana kusangana nedambudziko iri. Disney + kwete ichasvika kuSpain kusvika Kurume 31, 2020, saka dambudziko nekutarisira kodzero dzemadhijitari harina kutikanganisa. Muchokwadi, vashandisi chete vakakanganiswa vave vari muUnited States (Mbudzi 12) neAustralia neNew Zealand (Mbudzi 19).
Ivo havana kupa ruzivo nezve shanduko dzavakaita kuti vaite Disney + Linux inoenderana, asi inozivikanwa kushanda mumabhurawuza anozivikanwa seFirefox kana Google Chrome. Kana paine chero matambudziko nemamwe mabhurawuza, zvirokwazvo kusvika munaKurume vane nguva yekuzvigadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zvakatora anopfuura mwedzi, asi Disney + yatove kushanda paLinux